ကျန်းမာရေးဆေးနည်း Archives - Myitter
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျဖို့ ကိုယျခံအားမွငျ့စသေော အစားအစာငါးမြိုး
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျဖို့ ကိုယျခံအားမွငျ့စသေော အစားအစာငါးမြိုး တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့က စတငျ လိုကျတဲ့ C0v id19 ကူးစကျမှုဟာ ယ ခုအခါမှာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး ၁၂၀ ကြျော ကို ပြံ့နှံ့နပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ W H O […]
ကျား၊ မ အသက်အရွယ်မရွေး အသုံးပြုလို့ရတဲ့” ရှားစောင်းလက်ပတ် ”
အလှအပအတွက်သာမက အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးဝါးလို့ ဆိုလိုက်ရင် ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟာ မပါမဖြစ် ထိပ်ဆုံးနေရာက ပါဝင်တဲ့ နတ်ဆေးတစ်ပါးပါပဲ။ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ဖို့လည်း လွယ်ကူတယ်။ ကျား၊ မ၊ အသက်အရွယ်မရွေး အသုံးပြုလို့ရတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တယ်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီမရွေး အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် […]
အမာရွတ် ပျောက်ချင်လျင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ ….
March 9, 2020 Myitter 0
မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ထိခိုက်ရှနာဖြစ်လို့ အမာရွတ်ထင်ပါက သနပ်ခါးသွေးသော ကျောက်ပြင်ပေါ်တွင် ကွမ်းသီးအလုံးကို သနပ်ခါးသွေးသကဲ့သို့ သွေးပေးပြီး အနာရွတ်အပေါ်တွင် ပုံမှန်နေ့စဉ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ တစ်လအတွင်း အမာရွတ်ဖြစ်သောနေရာသည် လုံးဝသိသာစွာ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ Admim ကိုယ်တွေ့ပါ။ ယုံကြည်လျင် အမာရွတ်ပျောက်ချင်လျင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ ကွမ်းသီးအလုံးကို မြန်မာတိုင်းရင်း ပရဆေးဆိုင်တိုင်းတွင် လွယ်ကူစွာဖြင့် […]
သုံးလသာခံတော့မယ့် ကင်ဆာ ရောဂါသည်ကိုတောင် ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်း
ဒီဆေးနည်းသိတာကြာပါပြီ။ ဆေးပင် ဓါတ်ပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဓါတ်ပုံ ရပြန်တော့လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ တလောက အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က သူငယ်ချင်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသဲကင်ဆာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံတက်တဲ့အကြောင်း သူ့တပည့်ရဲ့ FB မှာတွေ့ရတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးပြောပြလိုက်ပါလို့တော့ ပြောမိရဲ့။ ပြောသလားတော့မသိ။ ယနေ့တော့ ပဋ္ဌာန်း သင်တန်းသူ တစ်ဦးရဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဦး […]
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ….
March 8, 2020 Myitter 0
ညအိပ်ရာ ဝင်ခါနီးတိုင်း ပျားရည်တစ်ဇွန်း စားပေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၇)မျိုး ….
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ပျားရည်တစ်ဇွန်းစားပေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၇)မျိုး ပျားရည်လို့ပြောလိုက်ရင် အသားအရေ လှစေတဲ့၊ အလှအပအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့အရာလို့ လူတွေက သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျားရည်မှာ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်းမှာ ပျားရည်ကို စားပေးမယ်ဆိုရင် ဒီလို အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ သိတဲ့သူတွေ ရှားပါတယ်။ ဒီတော့ […]
အိပ်မရအောင် ဆိုးနေတဲ့ချောင်း ချက်ခြင်း လစ်သွားမယ် …..
အိပ်မရအောင်ဆိုးနေတဲ့ချောင်း ကြက်သွန်နီနဲ့ ချောင်းဆိုး ပျောက်ခြင်းကို ကုသတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. အသုံးပြုပုံလေးကတော့ကြက်သွန်နီခြောက်လုံး လောက်ကို ပါးပါးလေး လှီးလိုက်ပါ….. ၎င်းကို ပျားရည်ခွက်ဝက်နှင့် ရောစပ်ကာ ဆူပွက် နေတဲ့ အိုးအပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ပါ ဒယ်အိုးဖြင့် ထည့်လိုက်ပါ…… အဖုံးအုပ်ပြီး ရေနွေး ငွေ့နှင့် ၂ နာရီကြာ […]